ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ငုတ်တုတ် ကိုပေါ”
'NO' ဆိုတာကလေးသာ.. ဖွင့်။
ကျေးဇူးပါဘဲ..ပိုကော..အဲ ကိုပေါရေ။ :))))))))))))
ငုတ်တုတ်ပေမယ့် ပါးစပ်လှုပ် လက်ကနိုးဗုတ်ဆိုတော့ တာဝန်ကျေပါသေးတယ်
No vote! vote no!
come read and disagree..